कञ्चनपुरमा कांग्रेस अधिवेशनः २ क्षेत्रमा रमेश प्यानल क्लिन स्वीप, एउटा क्षेत्रमा मात्रै विजयी
महेन्द्रनगर । नेपाली कांग्रेसको १४ औँ महाधिवेशन अन्तर्गत कञ्चनपुरमा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रको अधिवेशन र महाधिवेशन प्रतिनिधिका भएको मतदानको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भएको छ ।
परिणाम अनुसार कञ्चनपुरका अधिकाँस ठाउँमा संस्थापन पक्षको वर्चस्व देखिएको छ । पदाधिकारी तथा महाधिवेशन प्रतिनिधिका लागि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका विश्वास पात्र मानिने केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वमन्त्रीद्धय रमेश लेखक र एनपी साउदबीच प्रतिस्पर्धा भएको छ ।
केन्द्रमा संस्थापन निकट रहेका लेखक र साउदका कञ्चनपुरमा भने छुट्टा छुट्टै गुट छन् । अधिवेशनमा साउदले पौडेल निकट मानिने संविधानसभा सदस्य दिवान सिंह बिष्टसंग गठबन्धन बनाएका थिए । दिवान–एनपी र लेखक प्यानल बनाएर अधिवेशनमा होमिएका हुन ।
लेखकको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ मा, साउदको क्षेत्र नं. २ र बिष्टको क्षेत्र नं. १ मा बलियो पकड छ । आफ्नो शक्ति सञ्चय गर्न संस्थापन पक्षमै दुई चिरा देखिएको कांग्रेसका एक नेताले बताए । ‘रमेश र एनपी दाई दुवै संस्थापनकै हुन । तर आफू बलियो बनेर अगाडि बढ्न दुवैबीच प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ,’ ती नेताले भने, ‘शक्ति आर्जन गरेर बलियो हुन उहाँहरुले उपगुट चलाइरहेका छन ।’
कञ्चनपुरको एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा लेखक विजयी भएको छ । अन्य दुई क्षेत्रमा एनपी र दिवानको प्यानल विजयी भएका छन् ।
लेखकको क्षेत्रमा पछारिए एनपी
निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ मा केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकको प्यानल विजयी भएको छ । मतपरिणाम अनुसार निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ को लेखकसंग एनपी साउँदको प्यानल पराजित भएको हो ।
प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ को सभापतिमा लेखक प्यानलका केशव बहादुर चन्द वियजी भएका छन् । उनले ३३० मत प्राप्त गरे । उनका निकटतम प्रतिद्धन्द्धी एनपी प्यानलका गणेश नेगीले १९३ मत मात्रै ल्याउन सके ।
सचिवमा लेखक प्यानलकै नेता गंगादत्त भट्ट ३०१, उमेश प्रशाद जोशी ३०७, सहसचिव अर्जुनदत्त भट्ट ३४६, खडक बहादुर बस्नेत ३१९ मत ल्याएर निर्वाचित भएका छन । एनपी प्यानलका सचिव शुशिला चन्दले २२६, बलाराम पन्तले १९०, सहसचिव विकास श्रेष्ठले १४५, धिरेन्द्र प्रशाद गुरुङ्गले १५९ मत ल्याए ।
एनपीको क्षेत्रमा लेखक ‘क्लिन स्वीप’
निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ को नेपाली कांग्रेस प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय अधिवेशनमा नेता रमेश लेखकको प्यानल पराजित भएको छ ।
मतपरिणाम अनुसार क्षेत्रीय कार्यसमितिमा नेता एनपी साउदको प्यानलले लेखक प्यानललाई पराजित गरेको हो ।
क्षेत्र नम्बर २ का साउद प्यानलका लालबहादुर सिंह दोब्बरभन्दा बढी मतान्तरले क्षेत्रीय सभापतिमा निर्वाचित भएका छन् ।
उनले लेखक प्यानलका उम्मेदवार नवराज जोशीलाई १ सय ८४ मतान्तरले पराजित गरेका छन् । सिंहले खसेको ५ सय ४ मतमध्ये ३ सय ४१ र जोशीले १ सय ५७ मत पाएका छन् ।
सचिवमा साउद प्यानलका गणेशबहादुर सिंह ३ सय ५० र थानेश्वरप्रसाद भट्ट ३ सय ३१ मतसहित विजयी भएका छन् ।
लेखक प्यानलका उम्मेदवारहरु घनश्याम जोशी र नारायण बोहराले क्रमशः १ सय ३० र १ सय ३१ मत ल्याएका छन् ।
साउद प्यानलकै काशीराम भाट ३ सय १५ मत र रमेशप्रसाद भट्ट २ सय ७६ मतसहित सहसचिवमा निर्वाचित भएका छन् ।
लेखक प्यानलका जयबहादुर ऐरले १ सय ८२ र प्रदीप खड्काले १ सय ५० मत ल्याएका छन् । क्षेत्र नम्बर २ मा लेखक प्यानलका सबै उम्मेदवार पराजित भएका युवा नेता हिक्मत भण्डारीले जानकारी दिए ।
दिवानको क्षेत्रमा हारे लेखक
निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ को नेपाली कांग्रेस प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय अधिवेशनमा नेता रमेश लेखकको प्यानल पराजित भएको छ ।
मतपरिणाम अनुसार क्षेत्रीय कार्यसमितिमा नेता दिवान बिष्टको प्यानलले लेखक प्यानललाई पराजित गरेको हो ।
क्षेत्र नम्बर १ मा लेखक प्यानलका सबै उम्मेदवार पराजित भएको नेता कांग्रेस नेता बिसराम रानाले बताए ।
क्षेत्र नम्बर १ का दिवान विष्ट प्यानलका गोपी प्रसाद उपाध्याय क्षेत्रीय सभापतिमा निर्वाचित भएका छन् । उनले २६७ मत ल्याएका छन् ।
उपाध्यायले लेखक प्यानलका उम्मेदवार हरिशचन्द ठकुरीलाई पराजित गरेका हुन । ठकुरीले २२९ मत ल्याए ।
सचिवमा दिवान प्यानलका बिसराम राना र पदम बहादुर रोकाया विजयी भएका छन् ।
उनीहरु क्रमशः ३४७ र २७३ मत प्राप्त गरे । निकटतम प्रतिद्धन्द्धी लेखक प्यानलका हरी प्रसाद भट्टले २२१ मत मात्रै प्राप्त गरे ।
सहसचिवमा दिवान प्यानलका सुरेन्द्र राना २७० र हर्क बहादुर बिष्ट २६० मत ल्याएर विजयी भएका छन् । उनका निकटम प्रतिद्धन्द्धी लेखक प्यानलका तीर्थराज उपाध्यायले २१४ र जयबहादुर कुँवरले १८७ मत मात्रै ल्याउन सके ।
सभापति, उपसभापति र सचिव प्रतिनिधिमा पराजित
कांग्रेस कञ्चनपुरका सभापति हरीप्रसाद बोहरा महाधिवेशन प्रतिनिधिमा पराजित भएका छन् । खुला पुरुषतर्फ १० जनाका लागि भएको निर्वाचनमा बोहरा पारजित भएका हुन । उनले २४४ मत प्राप्त गरे ।
निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ पूर्वमन्त्री एनपी साउदको क्षेत्र हो । बोहरा रमेश लेखक निकट प्यानलबाट महाधिवेशन प्रतिनिधिको चुनावमा होमिएका थिए । क्षेत्र नम्बर २ कार्य समिति सहित प्रतिनिधिमा एनपी साउद प्यानल जितेको छ ।
खुला पुरुषतर्फ प्रतिनिधिमा चिन्तामणी भट्ट ३३२, दलबहादुर बोहरा ३०६, पुष्करराज ओझा ३०३, बहादुर सिंह थापा ३६६, लोक बहादुर देउवा ३०४, हेमराज ओझा २३५, मिनबहादुर सिंह २८० दुर्गा प्रसाद भट्ट २७६, उद्धवबहादुर बोहरा २६५ र टीकाराम बैज २५९ मत प्राप्त गरे ।
यस्तै उपसभापति बन्धु राना र सचिव ईश्वरीप्रसाद जोशी महाधिवेशन प्रतिनिधिमा पराजित भएका हुन् । सभापति बोहरा कञ्चनपुर–२, उपसभापति राना कञ्चनपुर–१ र सचिव जोशी कञ्चनपुर–३ बाट महाधिवेशन प्रतिनिधिका उम्मेदवार थिए ।
उनीहरु तीनै जना केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकको प्यानलबाट चुनावी प्रतिष्पर्धामा होमिएका थिए । लेखक निकटको प्यानल बनाउन महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेका जोशी जिल्ला सचिवमा मनोनित हुनुअघि उनका स्वकीय सचिव थिए ।
प्रतिस्पर्धाले साहसी र उर्जाशिल भए’
नेपाली कांग्रेस कञ्चनपुरका सभापति हरीप्रसाद बोहराले महाधिवेशन प्रतिनिधिमा दिएको सम्मानजनक मतप्रति मतदातामा आभार प्रकट गरेका छन् ।
निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट महाधिवेशन प्रतिनिधिका लागि चुनाव लड्का सभापति पराजित भएका थिए । मतपरिणाम सार्वजनिक भए पछि सभापति बोहराले सामाजिक सञ्जालमार्फत सम्मानजनक मतदान गर्ने मतदातामा आभार प्रकट गरेका हुन ।
पार्टीको आन्तरिक प्रतिस्पर्धाले साहसी र उर्जाशिल बनाएको अनुभूति भएको उनले आभारमा उल्लेख गरेका छन् ।
‘…पार्टीको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा ले मलाई थप साहसि र उर्जाशिल बनाएको अनुभूति भइ रहेको छ।यहाँहरूको साथ सहयोग सदैव रहने विश्वास गर्दै ,मलाई प्रदान गरेको अमुल्य मतको सदैव उच्च सम्मान गर्नेछु’उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्,‘राजनीतिक संगै सामाजिक जिम्मेवारी कर्तव्यबोधका साथ निभाउने छु ।’